एउटा सूचना जसले नेपालभरका बैंकमा आतंक मच्चियो, कसले ल्यायो त्यस्तो सूचना ? - Mountain Media
एउटा सूचना जसले नेपालभरका बैंकमा आतंक मच्चियो, कसले ल्यायो त्यस्तो सूचना ?
काठमाडौं। बुधवार नेपालमा एउटा सूचना सार्वजनिक भयो । जसका कारण मुलुकभरका बैंक आतंकित भए । नेपालका १६ वटा बैंकको पैसा ह्याक गर्ने भनेर एउटा इमेल आएपछि सिंगो बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको थियो । १६ वटा बैंकको नामै किटान गरेर इमेल आए पछि बैंकहरुमा आतंक सिर्जना भएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता र नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाह लगायतको नाममा यस्तो इमेल आएको हो । उनीहरुका बैंक लगायत १६ बैंकको नाम उल्लेख छ।अज्ञात ठेगानाबाट आएको भनिएको यही एउटा इमेलले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको हो।यो इमेल प्राप्त भएपछि सबै बैंकहरुलाई अलर्ट रहन भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ वटा बैंक २४ घन्टा भित्र ह्याक गर्ने भनेर गलत सूचना फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रमा ह्याकिङको गलत इमेल पठाएर भाइरल गराउनेलाई कारबाही गर्ने बताए।
उनले भने,“हामी हिजोदेखि अलर्ट बसिरहेका छौं।बुधबार रातभरी र आज बिहानैदेखि सिस्टम नियालिरहेका छौं।सबै ठिकठाक छ।”ह्याक हुने भनेर गलत सूचना फैलाउनेलाई खोजेर कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ।
Previous: अचानक ओली यसकारण भए ‘यु टर्न’, नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई कारवाही नहुने
Next: फेरि कोरोना बढ्न थालेपछि स्वस्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्‍यो यस्तो सुचना